Cunto-kalooriye hooseeya oo ah 900 kaloori | Cuntada Nutri
Tani waa cunto hypocaloric ah oo loogu talagalay dhammaan dadka u baahan inay ku dhaqmaan qorshe miisaan lumis ah ama nidaam dayactir, waa qorshe aad u fudud in la fuliyo. Hadda, haddii aad si adag u sameyso, waxay kuu oggolaaneysaa inaad lumiso qiyaastii 2 kiilo 8 maalmood gudahood.
Haddii aad go'aansato inaad cuntadan dhaqan gasho, waa inaad haysataa xaalad caafimaad oo caafimaad leh, cab biyo inta ugu badan ee suurtogalka ah maalin kasta, ku macaan faleebadaaga macaaneeyaha kuna kari xilliga cuntadaada milix iyo saliid saytuun ah. Waxaad u baahan doontaa inaad ku celiso liiska hoos ku faahfaahsan ee maalin walba ah inaad sameyso cuntada.
2 Yay tahay inuu sameeyo 900 kalori ee cuntada?
3 Immisa kiilo ayaad lumisaa?
4 Liistada toddobaadlaha ah
5 Talooyin Gaar ah
6 Tilmaamaha lagu fulinayo cuntadan hypocaloric
Quraac: 1 faleebo oo aad dooratay, 1 miro liin dhanaan ah iyo 1 rooti oo ku faafay jiis khafiif ah.
Subax-dhexe: 1 yogurt dufan yar.
Qado: 150g. digaag ama kalluun, 1 qaadasho oo saladh isku jir ah iyo 1 miro ah.
Galab dhexe: 1 faleebo aad dooratay iyo 50g. jiis baraf ah.
Cunto fudud: 1 faleebo oo aad dooratay, 1 miro liin dhanaan ah iyo 1 rooti oo ku faafay macaanka fudud.
Casho: 100g. hilib, maraq khudradeed iyo 1 faleebo. Waxaad cuni kartaa qadarka maraq ee aad rabto.
Hoos waxaad kaheleysaa menu todobaadle ah oo lagu sameeyo 900 kalori ee cuntada.
Yay tahay inuu sameeyo 900 kalori ee cuntada?
Waxay ku saabsan tahay cunto cadaalad ah oo adag, Maaddaama ay kaliya naga siiso 900 kalori maalintii. Taas oo macnaheedu yahay qadar yar iyo sida oo kale, laguma talinayo dadka sameeya jimicsi xoog leh. Sidaa awgeed, waad sameyn kartaa dhammaan kuwa caafimaadka wanaagsan iyo kuwa leh nolol nasasho badan. Haddii kale, waxay dareemi doonaan tamar la'aan waxayna noqon karaan dawakhaad inta lagu jiro maalinta. Haddii loo raaco warqadda, waa cunno si caddaalad ah waxtar u leh, taas oo noo oggolaanaysa inaan miisaanka si dhakhso leh iyo waqti aad u yar u lumino. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ka takhalusto dhowr kiilo oo ah waqtiga rikoorka oo aad caafimaad qabto, markaa waad dooran kartaa cunnadan.
Immisa kiilo ayaad lumisaa?
Cunnada 900 kalori ah waad gaari kartaa lumiso in ka badan laba kiilo usbuuc kasta. Waa run in tirada saxda ah aan la bixin karin, maxaa yeelay isku mid kama noqonayso qof walba. Haddii lagu daro cuntada lafteeda, waxaan ka caawinnaa jimicsi yar, xitaa haddii aysan ahayn mid aad u daran, markaa waxaan ka badnaan karnaa saddex kiilo iyo bar usbuucii. Cuntada noocan ah looma baahna in waqti badan la dheereeyo, laakiin la isku dayo in la sii wado cunista si dheellitiran si looga takhaluso saameynta soo-laabashada
Quraac: Casiir dabiici ah oo liin dhanaan ah oo leh 30 garaam oo rooti dhan ah iyo gabal farmaajo cusub.
Subax-dhexe: Gabal miro ah - 200 garaam
Cunto: 125 garaam oo kalluun ah 120 garaam oo broccoli ah
Cunto fudud: yogurt skimmed
Casho: Ukunta ukunta cad iyo kareem khudradeed oo guriga lagu sameeyo. Macmacaan, yogurt dabiici ah
Quraac: Faleebo leh 35 garaam oo rootiga qamadiga ah iyo seddex xabo oo turkey ama digaag ah
Subax-dhexe: yogurt dufan yar
Qadada: 150 garaam oo digaag la dubay ama la kariyey, oo leh saladh yaanyo, salaar iyo basal
Cunto fudud: Caano fadhi dabiici ah ama casiir liin dhanaan ah
Casho: 200 garaam oo khudradda la shiilay ah oo leh 100 garaam oo hilib digaag ah ama hilib digaag ah
Quraac: Hal qaxwo ama caano aan dufan lahayn, 30 garaam oo rooti qamadi ka samaysan iyo qaado qaado ah marmalade aan sonkor lahayn
Subax-dhexe: 200 garaam oo miro ah
Cunto: 125 garaam oo kalluun ah 250 garaam oo khudrad ah, markii aad dooratay
Cunto fudud: 30 garaam oo rooti qamadi dhan ah leh 0% jiis faafis buuran
Casho: 150 garaam oo baras ah oo ay ku jiraan 125 garaam oo boqoshaada ah iyo caano fadhi dabiiciga ah.
Quraac: 30 garaam oo miro dhan leh caano fadhi dabiici ah
Cunto: 150 garaam oo turkey oo leh khudaar
Cunto fudud: galaas casiir liin dhanaan ah
Casho: Eggplant ka buuxsan farmaajo ama jiis fudud iyo qeyb miro ah
Quraac: 30 garaam oo rooti la dubay oo leh laba xaleef oo ham ah
Qadada: 200 garaam oo kalluun ah iyo yaanyo iyo salad qajaar ah
Casho: 150 garaam oo digaag ama turkey oo leh isbinaajka iyo caano fadhi
Quraac: Jeex rooti ah, jiis Burgos ah iyo faleebo ama kafee leh caano dufan ah.
Cunto: Hilib lo'aad oo leh broccoli
Cunto fudud: Jeex rooti ah oo leh 4 xabo oo turkey ah
Casho: 150 garaam oo kalluun ah sida basaska badda oo leh 100 garaam oo chard ah ama isbinaajka iyo caano fadhi dabiici ah.
Quraac: Casiir dabiici ah, 30 garaam oo badar dhan ah iyo gabal farmaajo cusub
Subax-dhexe: Gabal rooti qamadi ka samaysan oo leh digaag digaag
Cunto: 40 garaam oo baastada qamadiga ah leh 125 garaam oo turkey la dubay iyo baaquli saladh ah.
Cunto fudud: 250 ml oo casiir dabiici ah ama miro
Casho: qasacad ah tuna tuna dabiici ah oo leh omelette Faransiis ah oo leh hal ukun iyo laba cadaan. Waxaa weheliya sacab faro badan oo digir cagaaran ah.
Talooyin Gaar ah
Marka aad diyaarinayso cuntada sida hilibka ama kalluunka, waxaa ugu wanaagsan in qadada loo isticmaalo qaado qaado oo saliid saytuun ah iyo mid kale oo la cuno marka la cunayo. Si aan ugu darno xoogaa dhadhan ah, waxaa had iyo jeer lagugula talinayaa in halkii aad ka isticmaali lahayn milix ama suugada, aan sidaas ku sameynno adoo ku daraya uunsi. Tan iyo markii ay ku dari doonaan dhadhan laakiin aan ku dari doonin kalooriyada. Dhanka kale waa inaan biyo badan cab, sidoo kale qaab faleebo ah maalintii oo dhan. Litir iyo badh ayaa naga caawin doona baabi'inta sunta iyo nadiifinta jirka.
Waa inaan xafidno warqadda shan cunto in aan soo sheegnay. Waa run inaan khudradda ama digaagga ugu beddelan karno turkey ama aan ku kala duwanaan karno noocyada kalluunka ee aan haysanno. Laakiin had iyo jeer qaddar ahaan sida lagu taliyay inaad awood u leedahay inaad u hoggaansato cuntada 900 kalori ah. Sida karinta lagu taliyey, foornada, kuleylka ama la dubay had iyo jeer waa la doorbidaa.
Tilmaamaha lagu fulinayo cuntadan hypocaloric
Marka hore waa inaan leenahay dhiirigelin wanaagsan. Si tan loo sameeyo, waxay noqon doontaa inaan ka fikirno ujeedkeenna oo aan ku darno awood, maxaa yeelay waa la gaaray. Isla marka aan aragno natiijooyinka ugu horreeya, waxaan qaadan doonaa cuntada kaloriinta ah ee 900 aad uga fiican.
Isku day inaad xoogaa jimicsi samayso, laakiin adigoon ka badin. Socodka socodka ayaa noqon kara mid ka mid ah kuwa ugu faa iidada badan.
Iska ilaali cunnooyinka macaan ama dufanka leh markasta. Markaad yeelato daqiiqad daciif ah, had iyo jeer way kafiican tahay inaad haysato faleebo ama miro yar oo biyo ka buuxo sida gabal qaraha ama sacab muggiis oo strawberries ah.
Sidaas si la mid ah, waxaan iska hilmaami doonnaa cabitaannada kaarboon-kaarboonka leh ama kuwa leh sonkor badan Waxa ugu fiican ayaa ah in la doorto gabal khudrad ah ama laga sameeyo casiir dabiici ah oo guriga lagu sameeyo.
Toddobaadkiiba mar, waad soo bandhigi kartaa hilibka cas, in kasta oo turkey ama digaaggu had iyo jeer ka fiican yahay, borotiinkiisa iyo waliba dufanka yar ee ku jira.
Haddii aad had iyo jeer ka daasho digaagga ama hilibka digaagga, waxaad sidoo kale ku dari kartaa sacab muggeed oo digir ah waxaadna ka samaysan kartaa saxan khudraddaas ah. Waxay na siinayaan borotiin isku waqti ah faybar iyo fiitamiino kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunnooyinka kalooriga oo kayar 900 oo kalori
Waxaan qabaa hypothyroidism mana qaato yogurt, maxay ku kala duwan yihiin
Ku jawaab anlivi23